आज देखि गङ्गा दशहरा स्नान पर्व शुरु « Lokpath
आज देखि गङ्गा दशहरा स्नान पर्व शुरु
काठमाडौं । प्रत्येक वर्षको ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल प्रतिपदा देखि शुक्ल दशमी सम्म दशहरा स्नान पर्व १० दिन मनाउने गरिन्छ । तिथीको आधारमा मनाईने यो वर्ष आजकै दिन अर्थात जेठ २८ गतेबाट असार ०६ गतेसम्म परेको छ । १० दिनको अवधीमा गङ्गा स्नान गरी १० प्रकारका नै व्यञ्जनको सेवन गर्नाले दश किसिमको पाप नाश हुन्छ भन्ने शास्त्रिय मान्यता रहेको छ ।
दशहरामा गङ्गा आदि महानदीहरुको पूजन गर्दा कायिका,वाचिक, र मानसिक पापहरुको नाश हुन्छ । शास्त्रहरुमा बताइए अनुसार अरुले नदिएका कुरा ग्रहण गर्नु , हिंसा गर्नु , परस्त्रीसेवन गर्नु गरी तीन प्रकारका कायिक पाप, कठोरता, असत्यभाषण, चुक्ली लगाउने काम र सम्बन्धन प्रलाप गरि चार प्रकारका वाचिक पाप र परद्रव्यको चिन्तन,अरुहरुको नराम्रो चिताउनु र असत्य कार्यमा प्रवृत्त हुनु गरी तीन प्रकारका मानशिक पाप हुन्छन् । यी सबैको योग गर्दा दश प्रकारका पाप मानिएका छन् ।
दशहरामा गङ्गा स्नान गर्दा उक्त सबै पाप नाश हुने शास्त्रमा बर्णन गरिएकोछ ।
ज्येष्ठ शुक्ल दशमीको दिन भगवान् रामेश्वर (महादेव) को दर्शन गर्नाले ब्रह्महत्या समानको पाप नाश हुन्छन् भन्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त तिथीमा नेपालको पश्चिमी जिल्ला गुल्मीको रिडीमा हृषिकेश भगवान् को भव्य महोत्सव पनि मनाउने परम्परा रहेको छ । त्यसैगरी काठमाण्डौको टोखा नजिकै रहेको हत्यामोचन तीर्थमा पनि स्नान गर्ने परम्परा रहेको छ । ज्येष्ठ शुक्ल दशमीको दिन नै वज्र गुरु पद्मसंभव जयन्ती पनि मनाउने गरिन्छ ।
विशेष गरेर प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी तिथी सम्म काठमाण्डौ देखि उत्तरतिर रहेको हिमाली रसुवा जिल्लाको गोसाईंकुण्डमा बृहत् मेला लाग्ने गर्दछ ।
नेपाल तथा विदेशमा रहेका भक्तजनहरु यो अवसरलाई पारेर गोसाईंकुण्डमा शयन गरेका भगवान महादेवको दर्शन गर्न आउने गर्दछन् । उच्च हिमशृङ्खलामा रहेको यस रमणिय पर्यटन क्षेत्रको अवलोकन गर्न कयौंको संख्यामा विदेशी पर्यटकहरु पनि आउने गर्दछन् । तर यस वर्ष भने कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड १९ को दोसो भेरियन्टको कारणले यी तिर्थस्थलहरुमा टाडाबाट दर्शनार्थीहरु आउने सम्भावना कम रहेकोछ ।
दशहरा स्नान गर्दा गङ्गा पुजन गर्ने मन्त्र-
ॐ नमो भगवत्यै दशपापहरायै गङ्गायै नारायण्यै रेवत्यै दशायै अमृतायै विश्वरुपिण्यै वन्दितायै ते नमो नमः ।।
दशहरा स्नान गर्ने मन्त्र—
मा कांचित्सरितं प्राप्य दद्याद्दर्भैस्तिलोदकम् ।
मुच्यते दशभिः पापैः समहापातकोपमैः ।।
प्रकाशित मिति: २०७८,जेष्ठ,२८,शुक्रवार १२:४९
यसकारण साउन महिनाभर मासु र मदिरा वर्जित छ !
काठमाडौं । साउन महिनालाई धार्मिक महिनाको रुपमा लिइन्छ । यो महिना वर्षकै सबभन्दा पवित्र महिना मानिन्छ । साउनमा विशेष नियमहरूको
वर्षात् महिनामा फुड प्वाइजनिङ कसरी हुन नदिने ?
अहिलेको मौसम वर्षाको भए पनि घाम लाग्दा गर्मी र पानी पर्दा चिसो भइरहेको छ । तापक्रममा आएको तातो र चिसोको